Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2012 December 14
Tantara tamin'ny 14 Desambra 2012 14 Desambra 2012
Thailand: Nahoana No Nandamoaka Ny Hetsi-panoheran'ny Pitak Siam Mpanoratra Mong Palatino · Azia Atsinanana Ny Pitak Siam (Arovy i Thailand), vondrona manohitra ny governemanta, dia nivoady ny hanetsika olona iray tapitrisa ho eny an-dalamben'i Bangkok tamin'ny 24 Novambra teo, saingy tsy nahavita namory afa-tsy 20.000. Samy nanoratra momba ilay tsy fahombiazan'ny Pitak Siam daholo ireo bilaogera, mpanao gazety sy ny eny amin'ny anjerimanontolo, ary... Global Voices Sy Ny Herin'ny Isika Mpanoratra Georgia Popplewell · Mediam-bahoaka Efa mba voaeritreritrao ve ianao hoe ahoana ny ataonay ato amin'ny Global Voices? Ity ary aseho anao ny ambadiky ny sehatra amin'ny fomba fanangonan'ny mpikambana maherin'ny 700 tantara ao amin'ity fikambanana virtoaly manontolo nefa manerantany. Miara-miasa isan'andro tsy voafefin'ny sisintany, hasin'ora (fuseau horaire), fiteny samihafa ireo mpitarika isan-tsampana, tonia ary mpanoratra sy mpandika lahatsoratra...
Ndeha Hitafa Amin'i Janet Gunter – Mpandray Anjara Amin'ny Global Voices Mpanoratra Juan Arellano · Hafanàm-po nomerika Nitafatafa tamin'i Janet Gunter mpandray anjara ato amin'ny GV sady mpitety izao tontolo izao i Juan Arellano, mpamoaka lahatroratry ny Global Voices amin'ny teny Espaniôla, mikasika ny asany ato anatin'ny vondrompiarahamoninay sy ireo tetikasany samihafa.
Feon'ny Fahamendrehana – Vehivavy Nieren-doza Tamin'ny Ady Mitam-piadiana Tao Kolombia Mpanoratra Silvia Viñas · Amerika Latina Feon'ny Fahamendrehana, tetikasa marolafy karakarain'ny Ivon-toerana Iraisam-pirenena Ho Amin'ny Fitsarana Tetezamita (ICTJ), mizara ny tantaran'i Yoladis Zúñiga sy Petronila Mendoza, vehivavy Kolombiana roa nitsoaka ny trano fonenany taorian'ny famonoan'ireo milisy mitam-piadiana ny vadin'izy ireo sy ny fanafihana ny tanànany. Tamin'ny faran'ny volana Novambra 2012 no navoaka ny tetikasa, ahitana raki-tsary telo sy lahatsary...
Ejipta: Graffiti Mameno ny Tambohon'ny Lapam-Panjakana iasan'ny Filoha Mpanoratra Ahmed Awadalla · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Tahaka ny tsara kosoka indray ny fisainana revolisionera ao Ejipta, noho ny fandrobaham-pahefana nataon'ny filoha Mohammed Morsy – ilay fanapaha-keviny vao haingana manitatra ny fahefany. Niteraka hetsi-panoherana nanerana ny firenena ny fanapaha-kevitra, ary ny nalaza indrindra dia ny sit-in natao manodidina ny Lapam-Panjakana. Ny mpaka sary Jonathan Rashad, izay navitrika tamin'ny fampiasana ny...